Sheekooyin Cajiib ah ayaa dib u dhac ku yimid iyo Bandhigga Subaxnimo oo ay ku baxday miisaaniyad dhan 300 milyan oo dollar | Wararka IPhone
Sheekooyinka Cajiibka ah ayaa dib u dhac ku yimid barnaamijka Bandhiga Subaxnimadiina waxaa ku baxay miisaaniyad dhan 300 milyan oo dollar
Bishii Maarso ee la soo dhaafay, Apple waxay ku dhawaaqday, halkii la xaqiijiyay, inay ka shaqeyneyso adeegga fiidiyoowga fiidiyowga, adeegga loogu magac daray Apple TV +. Adeegani, kaas oo markii hore soo bandhigi doonaa wax soo saarka asalka ah, waxaa ku hareereysnaa xan xan wax ka yar sanad, warar xan yar in yar la xaqiijiyay.
Laba ka mid ah taxanaha ugu soo jiidashada badan ee Apple TV + uu na siin doono, Barnaamijka Subaxnimo iyo Qisooyin Cajiib ah, ayaa ku jira wararka hal mar, inkasta oo ay jiraan sababo kala duwan. Musalsalka waxaa jilaya Jennifer Aniston, Resse Witherspoon iyo Steve Carell waxay leedahay miisaaniyad dhan 300 milyan oo dollar labadii xilli ee hore. Marka laga hadlayo Sheekooyinka Cajiibka ah, kala duwanaanshaha hal abuurka ayaa markale dib u dhigay mashruuca.
Apple waxay heshay xuquuqda taxanaha '80s' ee Steven Spielberg '' Sheekooyin Cajiib ah '' sanad ka hor. Si ay u fuliyaan mashruuca, waxay shaqaaleeyeen Brian Fuller, kaasoo bilo kooban gudahood uga tagay mashruuca sababo la xiriira kala duwanaansho hal abuur leh. Tan iyo waagaas maanaan maqal markale. Wararkii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in xilligan mashruucu wali curyaan yahay sababtuna tahay, markale, khilaafaadka hal abuurka ah.
Sida laga soo xigtay Hollywood Reporter, oo soo xiganaya ilo warshadeed, Apple wuxuu sii wadaa inuu ku adkeysto taas warshaduhu waa inay la qabsadaan Apple oo aysan u dhigmin sida kale. Faragelinta Apple ee nooca nuxurka taxanahan gaar ahaan uma oggolaanayo inay yeelato soo saare sharaf leh oo mar labaad soo bandhigi kara sheekooyin yaab leh.
300 milyan oo loogu talagalay Bandhigga Subaxnimo
Sida laga soo xigtay isla isla, miisaaniyadda ay Apple u qoondeysay wax soo saarka Bandhigga Subaxa wuxuu gaaraa 300 milyan 20-dhacdooyin taasi waxay ka mid noqon doontaa labada xilli ee hore. Qiimaha halkii dhacdo waa 15 milyan, oo lamid ah taxanaha Jason Momoa Eeg. 15-ka milyan, 4 milyan oo ka mid ah ayaa si toos ah ugu socota Jennifer Aniston iyo Reese Witherspoon, iyadoo midkiiba la siinayo $ 2 milyan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sheekooyinka Cajiibka ah ayaa dib u dhac ku yimid barnaamijka Bandhiga Subaxnimadiina waxaa ku baxay miisaaniyad dhan 300 milyan oo dollar
Sidee Twitter u maamushaa fariimaha hogaamiyaasha siyaasada aduunka?